Ụkọlọtọ French - Akụkọ gbasara Ụmụaka nke Igwe Igwe na nke Kpakpando
Home Tags Ọkọlọtọ nke French
Nkọwa: Ọkọlọtọ nke French
Nabata na diary French nke Ụmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-emeghị Nkọwa Eziokwu nke ugbu a na gara aga French Stars Stars. N'ebe a, anyị emeela ka ndị na-agụ akwụkwọ nwee ike ị nweta ma ugbu a ma kpochapụwo French Stars Stars nke kpochapụwo ndị mara mma nke egwuregwu.
O doro anya na France emeela ka bọlbụ na ndị agbụrụ ya nwere mpako. Ndị ọrụ ya ugbu a na ndị kpochapụwo ya kwesiri ịbụ ndị na-agba ọsọ na magazin Football anyị.
Bido, aha otutu ya bụ "Daxo". Edemede anyị nyere gị akụkọ gbasara Dan-Axel Zagadou Akụkọ nwata, akụkọ ndụ, Eziokwu ezinụlọ, nne na nna, mmalite ndụ, ụzọ ndụ, ...
LB weputara Akụkọ nke Onye na-agba ụkwụ na aha otutu "Bouba". Ọ bụ mkpuchi Boubakary Soumare Childhood Akụkọ banyere akụkọ ndụ ya, akụkọ ndụ ya, ndị nne na nna, ezinụlọ ...
LB na-enye akụkọ zuru oke nke otu Football Genius na aha otutu "Luffy". Akụkọ anyị nke Akụkọ Childmụaka Lys Mousset Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị…
LB na-ewetara ya Akụkọ zuru oke nke Football Genius bụ onye a kacha mara amara dị ka "Neal". Akụkọ Nlekọta Nwa Anyị Neal Maupay Plus Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Nwere ...
LB na-enye akụkọ zuru oke nke otu Football Genius na aha "Saint Max". Akụkọ banyere nwata anyị gbakwunyere akụkọ banyere eziokwu banyere ndụ na - ewetara gị ...
Na-amalite, a na-akpọ ya "Hunskelper". Anyị na-enye gị mkpuchi zuru ezu nke Moussa Dembele Childhood Akụkọ, Biography, Eziokwu Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Ndụ mbụ, ndụ onwe onye, ​​...
LB na-enye akụkọ zuru oke nke Legend Legend na aha njirimara "The King". Anyị Eric Cantona Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-eweta ...
LB na-ewetara akụkọ zuru oke nke Football Genius kacha mara amara aha ya "Luca". Anyị Lucas Digne Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu ...
LB na-enye akụkọ zuru oke nke otu Football Genius nke nwere aha "Lenglet". Anyị Clement Lenglet Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị…
LB na-ewetara ndị zuru ezu Akụkọ nke otu onye egwuregwu bọọlụ ama ama na French nwere aha "LaZoumance". Akuko umuaka anyi nke Kurt Zouma gbakwunyere na ihe ndi ozo adighi banyere ha.